Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.5.2 sahan-Leaks
Sahan-Leaks awood Beelaha cusub su'aalo u xiran yihiin oo u furan.
Intaa waxaa dheer in su'aalo la waydiiyo waqti badan oo dabiiciga ah iyo astaamaha dabiiciga ah, tiknoolajiyada cusubi waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan bedelno foomka su'aalaha. Su'aalaha sahanka badankood waa la xidhay, iyada oo jawaabeyaasha ay ka doorteen doorashooyin go'an oo kala duwan oo ay soo saareen cilmi-baarayaasha. Tani waa geedi socod cilmi-baaris oo caan ah oo "caan ku ah afkaarta dadka." Tusaale ahaan, halkan waxaa ku yaal su'aal la xidhay:
"Su'aashaan danbe waxay ku jirtaa mawduuca shaqada. Ma rabtaa inaad fadlan fiiri card iyo ii sheeg oo wax liiska this aad ugu jeclaan lahaa in shaqo?
Khatar kuma jiro in la eryo
Saacadaha shaqada waa gaaban, waqti badan oo bilaash ah
Shaqadu waa muhiim, waxaanay siinaysaa dareen ah guul. "
Laakiin kuwani waa jawaabaha kali ah ee suurtogalka ah? Maqasaariyayaashu miyay ka maqan yihiin wax muhiim ah iyadoo xaddidaya jawaabaha shantaas? Beddelka su'aalaha la xidhay waa su'aal sahlan oo faahfaahsan. Waa kuwan su'aal isku mid ah oo lagu waydiiyay foom furan:
"Su'aashani waxay ku xigta waa saabsan mowduuca shaqada. Dadka eegto, waayo, waxyaalaha kala duwan ee shaqo. Maxaad jeclaan lahaa ugu badan ee shaqo? "
Inkasta oo labadan su'aaloodba ay u muuqdaan kuwo isku mid ah, tijaabo sahamineed oo ay sameeyeen Howard Schuman iyo Stanley Presser (1979) ayaa shaaca ka qaaday in ay soo saari karaan natiijooyin aad u kala duwan: ku dhowaad 60% jawaabaha su'aasha furan kuma jiraan shanta jawaabaha cilmi baarayaasha sameeyay ( Shaxda 3.9).
Jaantuska 3.9: Natiijooyinka tijaabada sahan ee muujinaya in jawaabaha ay ku xiran tahay in su'aasha lagu waydiiyo foomka la xidho ama la furo. Waxaa laga soo qaatay Schuman and Presser (1979) , miiska 1.
Inkastoo su'aalaha furan oo la xidhay ay soo saari karaan macluumaad kala duwan oo labaduba ay caan ku ahaayeen maalmaha hore ee cilmi baarista sahanka, su'aalaha la xidhay ayaa yimid si ay u xukumaan goobta. Xukunkan ma aha sababtoo ah su'aalaha la xidhay ayaa lagu caddeeyay in ay bixiyaan cabbir ka fiican, laakiin halkii ay u fududahay isticmaalka; habka lagu falanqeynayo su'aalaha furan ee loo baahan yahay waa qalad ujeeda oo qaali ah. Ka guuritaanka su'aalaha furan waa nasiib darro maxaa yeelay waa hubaal macluumaadka ay cilmi-baarayaashu aysan wakhti hore ka warqabin taas oo noqon karta tan ugu qiimaha badan.
Si kastaba ha ahaatee, kala-guurka ka yimaada bani-aadanka ee loo maro sahaminta kumbiyuutarada, ayaa si kastaba ha ahaatee, waxay soo jeedinayaan hab cusub oo ka baxsan dhibaatadan hore. Maxaa dhacaya haddii aan hadda helno su'aalo sahlan oo isku xira sifooyinka ugu fiican ee su'aalaha furan iyo kuwa xiran? Taasi waa, haddii aan samayn karno sahan in labaduba u furan yihiin macluumaad cusub oo soo saara jawaabaha sahlan ee sahlan? Taasi waa sida Karen Levy iyo aniga (2015) ay isku dayeen inay abuuraan.
Gaar ahaan, Karen waxaan u maleynay in website-yada soo ururiya oo curate wax-soo-saarka soo-saarka laga yaabo inay awoodaan in ay ku wargaliyaan naqshadaynta noocyo cusub oo sahan. Waxaan si gaar ah u waxyoonay Wikipedia - tusaale wanaagsan oo ah nidaam furan oo firfircoon oo ay soo rogeen mawduuc soo dejiyey-sidaas darteed waxaan ugu yeeray sahankeenna cusub ee sahanka wiki . Sida Wikipedia fiddo muddo ku salaysan fikrado ka qaybgalayaasha ay, waxaan kuwaad baadhitaan in fiddo muddo ku salaysan fikrado ka qaybgalayaasha ay. Karen waxaan soo saarey saddex guryaha oo baaritaanada wiki ay ka dhergaan: waa inay noqdaan kuwo furfurnaan ah, wada shaqeyn, iyo la qabsasho. Ka dib, iyada oo koox ka mid ah kuwa horumariya webka, waxaan abuuray website ah oo laga yaabo in ay sameeyaan baaritaanno wiki-ka ah: www.allourideas.org .
Nidaamka uruurinta xogta ee sahaminta wiki waxaa lagu muujiyey mashruuc aan ku leenahay Xafiiska Duqa Magaalada New York si loo helo fikradaha deganayaasha ee PlaNYC 2030, qorshaha joogtaynta ee magaalada New York. Si ay u bilaabaan habka, Xafiiska Duqa wuxuu abuuray liis 25 fikradood oo ku salaysan ficilkooda hore (tusaale ahaan, "Baahida dhismayaasha waawayn si ay u sameeyaan waxtarka tamarta korantada qaarkood" iyo "Caruurtu ku baraan arimaha cagaaran sida qayb ka mid ah manhajka dugsiga"). Adiga oo isticmaalaya 25 fikradood oo ah miraha, Xafiiska Duqa wuxuu weydiiyay su'aasha ah "Maxaad u malaynaysaa inay tahay fikrad wanaagsan oo abuuraya nadaafad, New York City?" Jawaabiyayaal ayaa la soo bandhigay labo fikrado ah (tusaale, "dugsiyada furan ee magaalada sida goobaha dadwaynaha "iyo" Kordhinta beeritaanka dhirta geedaha ee xudduudaha sare leh "), waxaana lagu weydiistay inay kala doortaan iyaga dhexdooda (Jaantus 3.10). Ka dib markii la doorto, jawaab-celiyeyaasha ayaa isla markiiba la soo bandhigay labo kale oo la doortay. Waxay awoodeen inay sii wadaan macluumaad ku saabsan doorashadooda inta ay doonayeen inay codkooda dhiibtaan ama ay doortaan "aniga ma go'aansan karo." Dhibaato, marxalad kasta, jawaabeyaashu waxay awoodaan inay ku biiraan fikradahooda u gaarka ah Xafiiska Duqa Magaalada ayaa qayb ka ahaa qaybaha fikradaha loo soo bandhigo dadka kale. Sidaa darteed, su'aalaha ay ka qaybgalayaashu heleen labaduba waxay furanyihiin oo isku xireen isku mar.
Jaantuska 3.10: Isku-duwidda baaritaanka wiki. Guddi (a) wuxuu muujinayaa shaashadda jawaabta iyo guddi (b) oo muujinaya natiijada natiijada. Waxaa soo saaray ruqsad Salganik and Levy (2015) , shaxda 2.
Xafiiska duqa magaalada ayaa bilawday daraasaddiisa wiki bishii Oktoobar 2010 iyada oo lala kaashanayo kulamo xiriir ah oo bulshada ah si loo helo jawaab celinta degaanka. Ku dhawaad ​​afar bilood, 1,436 jawaab bixiye ayaa ku jawaabay 31,893 jawaab iyo 464 fikrado cusub. Dhab ahaantii, 8 ka mid ah 10ka dhibcood ee ugu sarreeya fikradaha ayaa ka soo qaybgalay ka qaybgalayaasha halkii ay ka mid noqon lahaayeen qaybaha fikradaha abuurka ee Xafiiska Duqa Magaalada. Iyo, sida aan ku sharxeyno waraaqdeena, qaabkan oo kale, oo leh fikrado la soo dhajiyay oo ka fiican ta dhalashada fikradaha abuurka, waxay ku dhacaan baaritaano badan oo wiki ah. Si kale haddii loo dhigo, iyada oo u furan macluumaad cusub, cilmi-baarayaashu waxay awoodaan inay bartaan waxyaabo ay dhici lahayd in la isticmaalayo habab badan oo xiran.
Marka laga soo tago natiijooyinka baadhitaanadan gaarka ah, mashruuceenna baaritaanka wiki-ga ayaa sidoo kale muujinaya sida qaabka kharashka cilmi-baarista dijitalka micnaheedu yahay in cilmi-baarayaashu ay hadda la qabsan karaan habab kala duwan. Cilmi-baadhayaasha waxbarasho ayaa hadda awood u leh inay dhisto nidaamyo dhab ah oo ay isticmaali karaan dad badan: waxaanu marti-galinay in ka badan 10,000 oo wiki-baaris ah waxaanan soo ururinnay in ka badan 15 milyan oo jawaabo. Awoodgan in la abuuro shay lagu isticmaali karo miisaanka ayaa ka imanaya xaqiiqda ah in mar uun website-ka la dhisay, kharashka aasaasiga ah ee aan si xor ah u heli karin qof kasta oo adduunka ah (dabcan, tani run ma noqon karto haddii aan bini'aadam Wareysiyada loo yaqaan 'interviewed'). Dheeraad ah, miisaankani wuxuu u saamaxayaa noocyo kala duwan oo cilmi-baaris ah Tusaale ahaan, 15-kii jawaab-celinta kuwan, iyo sidoo kale qaybteena ka-qaybgalayaasha, waxay bixiyaan baaritaan qiimo leh oo loogu talagalay cilmibaarista mustaqbalka. Waxaan sharxi doonaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha cilmi-baarista kale ee la abuuray qaab dhismeedka kharashka-digital-gaar ahaan qiimaha isbeddelka eber-marka aan ka hadlayo tijaabooyinka cutubka 4aad.